किन भारत फर्कनासाथ कंगना पक्राउ पर्दैछिन् ? - Jhapa Online
किन भारत फर्कनासाथ कंगना पक्राउ पर्दैछिन् ?
चर्चित भारतीय अभिनेत्री कंगना रनौत यतिबेला फ्रान्समा छन् । उनि फिल्म फेस्टिबलमा सरिक हुन फ्रान्स गएकी हुन् । तर एकाएक उनको विरुद्ध मुद्दा परेको छ । मुद्दाको कारण उनी भारत फर्कनासाथ प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्ने भारतीय मिडियाले जनाएका छन् ।
यसअघि आदित्य पंचोलीले सन् २०१७ मा कंगना रनौतविरुद्ध मानहानीको मुद्दा दर्ता गरेका थिए । आदित्यका अनुसार आफूले मुद्दा दर्ता गरेपछि कंगनाका वकिलले उनलाई बलात्कारको झुटो मुद्दामा फसाउने धम्की दिएका छन् । आदित्यले पुलिसलाई प्रमाणका लागि भिडियो पनि बुझाएको बताइएको छ । एजेन्सी
वर्षा भनेर नाम जुधेपछि…
उभौलीको अवसरमा सुरुङ्गामा विविध सास्कृतिक कार्यक्रम
पशुपति शर्माको अर्को गीत ‘हजुर हाम्रै पाला’ सार्वजनिक